Aabe gabadhiisa oo da'yar katagay ayadoo weyn si lama filaan ah u badbaadisay | Dusta News
Home > Editorial > Aabe gabadhiisa oo da’yar katagay ayadoo weyn si lama filaan ah u badbaadisay
July 7, 2020 July 7, 2020 Dusta News303Leave a Comment on Aabe gabadhiisa oo da’yar katagay ayadoo weyn si lama filaan ah u badbaadisay
Ka dib markii wax walbo ay kaga lumeen dhibaatada Hurricane Katrina, farshaxan Matjames Metson ayaa noloshiisa caqabado badan soo wajahday, sanado badan ka dib ayuu si lama filaan ah taleefan oga yimid gabadhiisa uusan arag tan iyo markay cunug yar ahayd, taasi waxayna siisay sabab uu ku noolaado.
Matjames Metson wuxuu jiray 16 jir markii uu la kulmay hooyada u dhaxday ee ilmaha u dhashay.
“Selanie wuxuu soo galay fasalkeyga taariikhda oo waa uu i afgartay. Waxaan ahaa sida, ‘inaan riyo ku jiro oo kale, waxaana is weydiiyay qofka uu yahay? ‘Waxaan ogaaday waxaan u baahanahayba inuu isaga yahay.’ “
Matjames Hooyadiisa waxay ahayd farshaxaniste, Aabihiisna wuxuu ahaa borofisar cilmiga farshaxanka iskuulada kala duwan ee fanka dhiga.
“Xiriikeenu Waxuu u dhaqaaqay si aan dhammaad lahayn, waxay umuuqatay sidii dabeeysha,” Matjames wuxuu yidhi, “runtii waligey ma helin fursad aan saaxiibo ku yeesho oo aan kula kulmo dadka, ka dibna aan wada baxno, sidaas darteedna had iyo jeer waxay i siisay fursad aan waligey iloobeyn ilaa maantana aan kujiro. “
Kadib joogitaankii koonfurta France, qoysku wuxuu u guuray magaalada yar ee Yellow Springs ee Ohio, halkaas oo uu kula kulmay saaxiibtiisii ​​ugu horeysay, Selanie.
Matjames ayaa yidhi, “Waannu isla kulannay xiriir aan lahayn sannado badan ka dibna uu soo gaba gaboobay, laakiin waxaan haysannay wax mar waliba isku keen xira, isla markaana Selanie uur bay lahayd, laakiin markaas maynaan ahayn lamaane. “
Matjames wuxuu jiray 18 sano mana uusan dareemin inuu diyaar u yahay Aabe nimo. Aad ayaan u argagaxay. Waxaay dumisay adduunkayga, “Ma lihi wax awood ah oo aan wax kaga qabto si kasta oo ay tahay. Aad ayaan u yaraa, aadna waan u waalnaa mana aanan garanayn waxaan sameeyo.”
Selanie waxay dhashay gabadh yar oo la yiraahdo Tyler.
Muddo sanado ah, Matjames iyo Tyler ayaa in badan ka wada hadlay sababta uu uga tagay.
Waxay fahantay sababta inaay ahayd daruufo dhaqaale oo heysatay Matjames.
Waxaan wada hadalnay dhowr isbuuc ka hor Marka waa wax fiican in qofkii aan uga tagay si cad u fahmo sababta ay ahayd inaan u sameeyo oo aan iga xanaaqin, taasoo ah mid weyn oo geesinimo leh runtiina cajiib ah.
Tyler wuxuu qirayaa inay jirto ceebeyn xagga bulshada ah oo la xiriirta aabayaal ka tagay qoys, laakiin wuxuu dhahay wixii Matjames uu ku sameeyey ayaa ugu filan cashir.
Haddii ay u hoggaansan lahaayeen bulshada “heerarka dhaqanka” oo ay u xukumi lahaayeen si cadaalad ah inuu si xun u gaari lahaa dhaawac uuna ku muteysan lahaa xabsi ayay tiri. Taabadalkeed waxay heshay qoys cusub, il cusub oo dhiirigalin leh, waxayna ku “nooshahay nolol weyn oo farxad iyo reeyn reeyn leh hada”.
Duufaantan Katrina ayaa baabi’isay New Orleans bishii Ogosto 2005, daadadku waxay gaareen meelo badan oo magaalada ka mid ah. Ku dhawaad ​​2,000 oo qof ayaa ku dhintay hal milyanna waay ku barakaceen, waxaana jiray burbur naxdin leh.
“Waxay ahayd baabi’in,” ayuu yidhi Matjames, oo weli ka murugaysan wixii uu arkay. “Haddii aan indhahayga xiro weli waan xasuustaa oo igama goin.
Dhimasho aad u badan ayaa ka jirtay, wax walbana way burbureen. Dukaamadii, raashinkii iyo goob walboo ganacsi. Waxaa jira dad aad u tiro badan oo guryahooda iyo hantidoodii lumiyay.
Gurigiisii ​​Matjames waxaa buuxiyay daadad xoogan oo wuxuu lumiyey hantidiisii, oo ay ku jiraan ku dhowaad dhammaan farshaxanimadiisii.
Isaga oo ka baqay inuuna qaadan karin eeyaha uu jecel yahay, Matjames wuxuu ku hadhay magaalada burbursan sideed maalmood, ilaa maalin maalmaha ka mid ah uu ka helay taleefan shaqeynaya, wuxuu u yeeray hooyadiis si uu u ogeysiiyo inuu nabad qabo, ka dibna wuxuu wacay saaxiibkiisa, kaas oo ka caawiyay helitaanka aalad uu ku gaaro Los Angels.
Wuxuu u guuray guri aad u yar oo kuyaala isgoyska mashquulka badan ee degmada LA ee Koreatown, iyada oo shaqaalaha duminta ay ku mashquulsan yihiin guryaha ka dhisan hareerahahiisa.
“Markii aan u soo guuro gurigani waxay si macno daro leh u burburayaan dhismo kasta oo igu xeeran. Markaa dhisme yar oo afarta dabaq ah ee aan ku jiray si lama filaan ah ayaa waxaa ku batay jiirka iyo baranbarada iyo cayaayn fara badan,” ayuu yidhi.
Mareykanka ayaa sheegay in ardayda ajnabiga ah ay qasab tahay in ay baxaan haddii daraasada ay ku baxeyso aaladda internetka
Gobolka Sool oo ka dhacay Dagaal beeleed
Dowladda Somalia oo sheegtay in dib loo Furi doono Xarunta CID-Da
Nabad sugidda Jubbaland Oo Soo Bandhigtay Qaraxyo Ay Gacanta Ku Dhigtay